မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ် အပိုင်း (၅)
January 3, 2010 at 4:57 am	(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ်)
ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာတွေ တော်တော်လေး များသွားပြီ ထင်ပါတယ်။
ပထမပိုင်းမှာ ကိုယ်ကိုးကွယ် အားထားတဲ့ဘုရား ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲ၊ လေးစားထိုက်ရဲ့လား၊ ဉာဏ်ပညာကြီးရဲ့လား၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ အပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ကြောင်းကို ညွှန်ပြနိုင်လောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်ပါရဲ့လား ဆိုတာကို လူငယ်လူလတ်တွေ သုံးသပ်နိုင်အောင် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ဒီသဘောသွားတွေ ပါပါတယ်။
တတိယပိုင်း(က)(ခ)(ဂ) တွေမှာတော့ ညွှန်ကြားတာကတခြား၊ လုပ်ကြတာကတခြား ဖြစ်နေတဲ့ အနေ အထားတွေ တရားစစ် တရားမှန်ကို မကျင့်သုံးကြပဲ အလွယ်လမ်းလိုက်နေကြပုံတွေ ဆရာတော် ဘုရားကြီး များရဲ့ ညွှန်ပြမှုတွေကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
စတုတ္ထပိုင်းမှာတော့ ငါတို့ လူဆိုတာ ဘယ်လိုလဲလို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်သိအောင် လူငယ်လူလတ်တိုင်း လိုလို ကျွမ်းဝင် ရင်းနှီးကြတဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ လူကို နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြပြီး၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ ညွှန်ပြခဲ့တဲ့ စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပုံ “စိတ်”က ထိန်းကြောင်း မောင်းနှင် နေပုံတို့ကို တင်ပြပြီး၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဘိဓမ္မာ တရားတချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ သလို မိမိသည်သာ မိမိ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
အခု တင်ပြချင်တာက အပိုင်း(၅)ပါ။
အပိုင်း(၅) မတင်ဆက်ခင်မှာ Blog ကို အချိန်ပေးပြီး၊ ဖတ်ကြရတဲ့ လူငယ်လူလတ်တွေ ဒီBlog ကို ဖတ်ပြီး၊ ဘယ်လို အကျိုးရှိနိုင်မှာလည်း ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
တင်ဆက်သူ ကျွန်တော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လေ။
ရည်မှန်းချက်ကို လွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့ ဒက်ကနဲ တင်ပြနိုင်စွမ်း မရှိသလို၊ တချို့ စာသဘောကိုက သိုင်းရ ၀ိုင်းရတဲ့ သဘောလေးတွေ ရှိတတ်တာကြောင့် ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင် မပျောက်ရအောင် နည်းနည်းတော့ Remind လုပ်မှ သင့်မယ်ထင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအခြေအနေ မိမိ ၊ မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့၊ နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ စသည်ဖြင့် ဖြန့်ကျက် ကြည့်လိုက်ရင် ဘာတွေ တွေ့ရမလဲဆိုတော့-
ကျွန်တော်တို့အားလုံး သဘောတူညီနိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ရင်ဆိုင်နေရတာ အားလုံး အကြပ်အတည်းတွေပါ၊ အဆင်မပြေမှုတွေပါ၊ ဆင်းရဲမှုတွေပါ။
ရတဲ့လုပ်ခနဲ့ လူနေမှု စရိတ်စက မကာမိလို့ ပူပန်မှုတွေ-
တိုးတက်ပါတယ် (ရုပ်ဝတ္ထုတွေ) ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီး ရောက်ရောက်လာလေ၊ လူတွက ပိုပင်ပန်း လာလေ။ ပိုစိတ်ဆင်းရဲ လာကြလေပါပဲ။
ပညာ တပိုင်းတစနဲ့ ကျောင်းကိုထွက်ခွါခဲ့ရသူတွေလည်း မရေမတွက်နိုင်။
အနာဂါတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ့် လူငယ်တွေရော ဘာဖြစ်နေကြလဲ ?
ကျွန်တော် အင်တာနက်ဆိုင် ရောက်တဲ့အခါတိုင်းလိုမှာ ကျွန်တော့်အနီးအပါး ထိုင်တဲ့ လူငယ်တွေ အများစုဟာ Chat နေကြတာများတယ်။ တခါတလေ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်ဖြစ်ပြီး၊ အော်ဆဲချင် ဆဲနေကြ သေးတယ်။
Cafe နဲ့ ရင်းနှီးလာလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ-
လူငယ် တော်တော်များများဟာ Entertainment တွေ ဖက်ပဲ စိတ်သန်နေကြတယ်၊ Internet ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့စွယ်စုံကျမ်းကြီးကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်ဘ၀ တိုးတက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမယ်လို့ စဉ်းစားကြပုံ မရပါဘူး လို့ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော် သူတို့ကို အပြစ်တင်မယ် မထင်ပါနဲ့၊
သူတို့မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ နှလုံးသား ရှိချင်ရှိမှာပါ၊
ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အားနည်းနေတာ “အသိတရား” ပါ၊ “ခံစားမှု” ပါ။
ကျွန်တော် ရှေးဦးမဆွ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဘ၀ တိုးတက်မှု၊ ချမ်းသာမှု၊ အောင်မြင်မှု၊ နောက်ဆုံး သံသရာ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ကြောင်းအထိ အားလုံးဟာ အတိတ်ကံနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကံ (နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် ဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင်) ပေါ် မူတည်ပါတယ်။
အတိတ်ကံကောင်းလို့ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပေမယ့်လည်း-
ပစ္စုပ္ပန်ကံရဲ့ ကောင်းစွာ အထောက်အပံ့ မရရင်လည်း အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင် မြင် ပါဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်ကံမှာမှ မိမိကိုယ်တိုင် အားထုတ်မှုနဲ့ မိမိအားထုတ်မှု မှန်ကန်အောင် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မှု ဆိုတဲ့၊ မှီခိုရတဲ့အရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်၊ လူရယ်လို့ဖြစ်လာ ကတည်းက ပတ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးပေးမှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ကျေးညီနောင် ဇာတ်ဟာ အထင်အရှားပါပဲ။
“သညာ” ကမှတ်ထားရင် မှတ်ထားပါများရင် သတ္တိကိန်းလာပြီး၊ ကံမြောက်တော့တာပဲ၊ ဒီကံတွေဟာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ထွက်ပေါ်လာပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာပဲ။
မှားတာ မှတ်သားထားပြီးရင် အလုပ်အဖြစ် အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အခါမှာ အမှားကိုပဲ အကောင် အထည် ဖော်တော့တာပါပဲ။သင်ယူ သိမှတ် ခံစားထားရတာတွေ မှန်သမျှ ၀ီထိစိတ် ဖြစ်တဲ့အခါ ဇောဝီထိကျလောက်တဲ့ မှတ်သိ ခံစားမှုဖြစ်တိုင်း Registered လုပ်ပြီး၊ သိမ်းပိုက်လိုက်တော့တာပါ။
“ပုထုဇဉ် ဘယ်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မှားတယ်ထင်ပြီး၊ လုပ်ကြတာ မရှိပါ”
မှန်တယ်ထင်ပြီး၊ လုပ်ကြတာချည်း ပါပဲလို့- အာသောကကျောက်စာ ရေးထိုးခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ လုပ်နေကြတာ ပါပဲ။
မှန်တယ်ထင်ပြီး၊ လုပ်ကြတာချည်း ပါပဲ။
အဖြေထွက်မှသာ မှန်တာ၊ မှားတာ ထင်ရှားပေါ်လွင် လာကြတာပါ။
ဒါကြောင့် လူဆိုတာ ကောင်းစွာသင်ကြားပေးဖို့ လိုတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်မျိုးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟာ မူလစွမ်းရည် ရှိပြီးသားပါ။ လူမှာတော့ မရှိပါ။
ခွေးလေးတစ်ကောင် ခွေးမကြီးက မွေးပြီးပြီးချင်း၊ သူ့အာဟာရအတွက် နို့ကို သူကိုယ်တိုင် ဖက်တွယ် စို့ယူနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်၊ လူမှာ အဲ့ဒီလောက်ပင် စွမ်းရည် မရှိပါဘူး၊ မိခင်က ထွေးပွေ့တိုက်ကျွေးမှ စို့ယူခွင့်ရတာပါ။
ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲသင်သင် အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်ရင် ရပ်တန့် သွားပေမယ့် လူမှာတော့ သင်ပေးရင် သင်ပေးသလောက် လက်ခံ ယူနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော့်တို့ ကောင်းစွာ သင်ကြားပေး ခံရပါသလား?
လူငယ်လူလတ်များ အလေးအနက် စဉ်းစားပါ။
သင်ကြားပေးမယ့် သူတွေ တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာတွေက တွက်နည်းအမှားနဲ့ တွက်ချက် ရထားတဲ့ ပညာ တွေဖြ စ် နေ ရင်-
ကျွန်တော်တို့လည်း အမှားတွေပဲ ရမှာပါပဲ။
ကတိဆိုတာ လူသားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကွ-
ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဟာ ဘ၀အောင်မြင်ရေးရဲ့ သော့ချက်ကွ-
အရှက်အကြောက် တရားနှစ်ပါးဟာ ကမ္ဘာစောင့်တရားကွ-
အသိဉာဏ် ပညာရှိသူသာ ဘေးကင်းစွာ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနိုင်မှာကွ-
ပညာသင်ကြားရယူရမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စွမ်းစွမ်းတမံ အားထုတ်မှု (Utmost ability) ဟာ ဘ၀ အောင်မြင်ရေးကွ-
စိတ်ကောင်းစေတနာ ရှိမှုဟာ လူယဉ်ကျေးမှုကွ-
စသည်ဖြင့် တကယ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသိတရားတွေ ကျွန်တော်တို့ ရကြပါသလား။
မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောခဲ့တဲ့ လူတွေအတွက် အောင်မြင်ရေး လမ်းညွှန် ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာကို သိလည်း သိအောင်၊ ကျင့်သုံးနိုင်အောင် လည်း လမ်းဖွင့်ပေးမယ့်သူ တော်တော်မှ တော်တော့်ကို ရှားပါးလာမှတော့-
လူငယ်တွေကို ဘယ်လို ပြောရမလဲ။ ဘယ်လို အပြစ်တင်ရက်ပါ့မလဲ။
မယုံမရှိပါနဲ့၊ ဟီရိ သြတ္တပ္ပ ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာစောင့် တရားဖြစ်တဲ့ အရှက် အကြောက်သာ ကင်းမဲ့သွားရင်တော့ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စာရင်းထဲက ထုတ်ပစ်ရမယ့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
ကိုယ့်အသက် ကိုယ်အသေခံပြီး၊ သူများတွေပါ သေအောင် ဗုံးခွဲသတ်ဖြတ်ရဲတဲ့၊ သတ်ဖြတ် ရက်တဲ့ သူတွေ ပေါ်လာတာ အထင်အရှားပဲ မဟုတ်ပါလား။
အပြစ်မဲ့တဲ့ အရပ်သားတွေ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Twin Tower ကြီးကိုရော၊ အပြစ်မဲ့ လေယာဉ်စီး ခရီးသည်တွေကိုရော မိမိကိုယ်တိုင်ကိုပါ သေကြေပျက်စီး ဆုံးရှုံးစေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ဘယ်က ရလာပါသလဲ။
ကျွန်တော်တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေအရတော့ အဖြေရှိပြီးသားပါ။
အတိတ်ကံ အားနည်းသူကို ပစ္စုပ္ပန်မှာ မကောင်းမှုတွေ အကုသိုလ်စိတ်တွေ ထပ်ပြန်တလဲလဲ ကိန်းလာအောင် စေ့ဆော်ပါများတော့- တရားသဘောနဲ့ ပြောရရင် မကောင်းမှုအာရုံတွေနဲ့ ဒွါရခြောက်ပါးနဲ့ အတင်း ထိတွေ့ပေးနေတော့ ဇောကျလောက်တဲ့ ၀ီထိစိတ်တွေကျ၊ ပထမဇော အားကောင်းလွန်း လောက်အောင် သွေးထိုး ၊ လွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာ သတ်ရဲ သေရဲ ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပါပဲ။
ဘုရားဖူးသွားတဲ့ ယာဉ်တွေ မှောက်ကြ သေကြတယ်။
ဘုရားဖူးလှေ သင်္ဘောတွေ မှောက်ကြတယ်။
ဘုရားဖူးလာတဲ့ သူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နင်းမိပြီး၊ သေကြတယ်။
ဘုရားက အဲ့ဒီ ဒုက္ခတွေက မကယ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ရှင်းမနေဘူးလား၊ ဒါပေမယ့်လည်း မမှတ်ကြသေး ဘူး၊ နောက် တစ်နှစ် လုပ်ကြပြန်တာပဲ၊ သေကြပြန်တာပဲ။
အဲ့ဒီ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ လူတွေဟာ မှန်ကန်စွာ မသိမမြင်နိုင်ကြဘူးဆိုတာ ထင်ရှား နေတာပဲ မဟုတ်လား။
ရုပ်ဝတ္ထုတွေ တိုးတက်သလောက် စိတ်ဝတ္ထုတွေ နိမ့်ကျလာတာ အထင်အရှားပါပဲ။
တခြား ဘုရားတွေတော့ ဘာတွေဟောလို့ ဘယ်လိုကယ်မ,မယ် မသိပေမယ့်၊ ကျွန်တော်တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ကတော့ သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကတည်းကိုက ဘုရားနား လာကပ်နေတဲ့ ရဟန်းကိုတောင် မောင်းထုတ် ခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ငါ့ကို ဖူးမြှော်နေလို့ အလကားပဲ၊ ငါဟောတဲ့ တရားကိုသာ ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောခဲ့တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာ ဟင်းစားပေးတဲ့သူ မဟုတ်ပါ၊ ကွန်ချက်ပါ ပြခဲ့သူပါ။ (ကျွန်တော့်မှာ တခြား ဥပမာပေးစရာ မတတ်လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာပေအားနည်းချက်ပါ၊ သည်းခံတော်မူကြပါ။)
အဲ့ဒါကို ရလာမယ့်ဟင်းစား ( ချက်စားစရာလေးတွေ ) မြှော်ပြီးသာ နေကြဦးမယ် ဆိုရင်တော့-
ကိုယ်တကယ် အကျိုးရှိစေမယ့် ကွန်ချက် (ကွန်ပစ်တတ်မှု) မသိပဲ၊ ဆင်းရဲတွင်း နက်ပြီးရင်း နက်နေကြ ရဦးမှာပါ။
ဒီတော့ လူငယ်တွေ လူလတ်တွေ စွမ်းအားရှိလာအောင်၊ တန်ဖိုးရှိလာအောင် ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လို ထုတ်ဆောင် ကြမှာလဲ။
အဲ့ဒါဟာ ဒီ Blog ကို ရေးရခြင်းရဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မူလ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေး၊ သံသရာ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ အပြီးတိုင် လွတ်မြောက် ရေးအထိ တရားစစ် တရားမှန်တွေ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ရှိပြီးသားပါ။
ကိုယ့်ကိုမှာ ကိန်းနေတဲ့ မကောင်းမှုဓာတ် (ပါပဓာတ်)တွေ ပါးသွားပါလိမ့်မယ်၊ နောက် ကုသိုလ်ဓါတ် (ဓမ္မဓာတ်)တွေ ကိန်း-ကိန်းလာပါလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီအခါမှာ လောကီအောင်မြင်မှုတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်မှာ ရှိမှ သူများကို ပေးနိုင်မှာပါ။
ကိုယ် အရင် အောင်မြင်အောင် ကြိုးစား၊ နောက်တော့ မျှဝေ၊ မိမိရော သူတစ်ပါးပါ ချမ်းသာစေမယ့် လမ်းကြောင်းကို ရောက်လာမှာပါ။
စာဖတ်သူ ခံစားဖူးလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
“ကျွန်တော် မကောင်းမှန်းတော့ သိပါတယ်၊ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ပါ” ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ပုထုဇဉ်တွေမှာ အများကြီးပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို မှန်ကန်စွာ သိလာပြီး၊ ကျင့်လာရင်-
“မကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်၊ မလုပ်ပဲလည်း နေနိုင်တယ်”
“ကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်၊ လုပ်လည်း လုပ်ဖြစ်တယ်”
ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာမှာပါ။
“မိမိမှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအားတွေ အကုန်ထုတ်သုံး နိုင်တဲ့သူ” ဖြစ်လာမှာပါ။
လောလောဆယ် ဂုရုကြီး ဦးဂိုအင်ကာကိုပဲ ကြည့်ပါ။
တရားတော်ရဲ့ သဘောအမှန်ကို ငယ်စဉ်(အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်)လောက်ထဲက သိခဲ့တော့ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘယ်လိုမှ ထင်နိုင်စရာ မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖော် နိုင်နေတာ လက်တွေ့ ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူငယ်လူလတ်တွေရော ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မလာရမှာလဲ?
ရှေ့ကိုလည်း ဆက်ဖတ်နိုင်ဖို့ အားမွေးပါဦး။
နောက်တခန်းမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို လူငယ်လူလတ်တို့ နားလည်နိုင်လောက်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစား တင်ဆက်ပါမယ်။
ပြီးရင် နောက်ဆုံးအခန်းမှာ ၀ိပဿနာ တရားတော် အားထုတ်နည်း ဖော်ပြပါမယ်။ ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံး အခန်း တင်ဆက်နိုင်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။
ကျွန်တော်သိလို့ တတ်လို့ မဟုတ်ပါ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို ဉာဏ်မှီသမျှ ရှင်းပြနေတာပါ။
ဥပမာ ပြောရရင် ကျောင်းဆရာလိုပေါ့။
ဒေါ်လတန်ရဲ့ အက်တမ်သီအိုရီဟာ ဒေါ်လတန် ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ သီအိုရီပါ။ အဲ့ဒီ သီအိုရီကို ဓာတုဗေဒ သင်တဲ့ဆရာက ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် ရှင်းပြတဲ့ သဘောမျိုးပါ။
စာသင်ကောင်းတဲ့ ဆရာမျိုးဖြစ်အောင်တော့ ကျွန်တော် စွမ်းအားရှိသလောက်တော့ ကြိုးစားနေတာ ပါပဲ။
နှစ်သစ်မှာ လူသစ် စိတ်သစ်နဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ တရားကျေးဇူးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရအောင် စွမ်းဆောင်ကြပါ စို့လားခင်ဗျာ။
January 1, 2010 at 10:56 am	(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ်)
“ငါ့အသိတစ်ယောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့သူက ငါ့နဲ့ ပြောမနာဆိုမနာဆိုတော့ ငါ့ကို ပြောတာလေး တစ်ခုရှိတယ်၊ သူမေးတဲ့ကိစ္စကို မင်းကိုပြန်ပြောရမှာလည်း အားနာတယ်၊ ဘာသာရေးကို ထိခိုက်သလို ဖြစ်နေလို့”
“မင်းစိတ်ထဲမှာရော ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်နေပြီလား”
“အေး-မဖြစ်ရင်တော့ ပြောသာပြောပါကွာ၊ ငါက ဗုဒ္ဓကို လေးစားမြတ်နိုးနေတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကို ဉာဏ်မီသလောက် လိုက်နေတာပဲ၊ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က မရှင်းမလင်း၊ အကြိတ်အခဲကို မနှစ်သက်ဘူး၊ ပရိနိဗ္ဗာန် မပြုခင်မှာ မရှင်းလင်းတာ မေးစရာရှိတာ အကြွင်းအကျန်မထားဘို့ မှာခဲ့ဖူးတယ်-လို့ ငါဖတ်မှတ်ဖူးတယ်၊ မင်း မရှင်းတာကို ငါအကုန်ရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ အာမတော့ မခံနိုင်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ တရားတော်တွေထဲက ငါဖတ်မှတ်သိဖူး ကြားဖူးတာနဲ့ နှီးနွယ်နေရင်တော့ ရှင်းပြနိုင်ကောင်းရဲ့ပေါ့၊ ပြောသာပြောပါ”
“ဒီလိုကွ သူက ငါ့ကိုနောက်သလို ပြောင်သလိုပြောတာ၊ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တော်တော် လောဘကြီးတာပဲတဲ့- သူကတော့ သူသေရင် သူပိုင်တာတွေ အကုန်ထားခဲ့မှာပဲ-တဲ့၊တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေက တော့ နောင်ဘ၀အထိ ပါအောင်ယူရမယ်၊ နောင်ဘ၀အတွက် အထုပ်ကလေး ထုပ်ရမယ်၊ ဒါလေးပဲ ကိုယ့်နောက်ပါမှာ-ဆိုတော့ လောဘကြီးလွန်းသတဲ့၊ မင်း ဘယ်လိုသဘောရသလဲ”
“ဟင် မင်းက မချေပတော့ဘူးပေါ့”
“သူမှန်တာပြောတာပဲ၊ ဟုတ်တယ် ။ သူပြောသလို တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဟာ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ”
“မင်းပြောတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာ အမြင့်မြတ်ဆုံးပုံစံ ပြောပြီး၊ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက လောဘကြီးတဲ့ မကောင်းတဲ့ စာရင်းဝင်နေတော့ ငါခေါင်းရှုပ်ချင်လာပြီ၊ ငါက မင်းရဲ့ကာကွယ်မှုကို နားထောင်ပြီး ဒီကောင့်ကို ပြန်တွယ်ချင်တာ၊ မင်းပြောပုံအရဆို သူကမှန်ပြီး၊ ငါတို့က ရှုံးရတော့မှာပေါ့“
“ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူငယ်လူလတ်တွေအတွက် ငါ Blog တစ်ခု ရေးနေတယ်၊ အဲ့ဒီအထဲမှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေဟာ အလွန်ရိုးရှင်းတယ်၊ နောက်ပြီး အလွန်နက်ရှိုင်းတယ်လို့ တင်ပြခဲ့ဖူးတယ်၊ စကား မစပ် မင်းနဲ့ငါ ပြောတာတွေ ကိုလည်း စာဖတ်သူတွေ ဗဟုသုတအတွက် Blog မှာ ရေးမှာနော်၊ မင်းကြေနပ်ရဲ့လား“
“ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာ အလွန်နှစ်သက် မြတ်နိုးဖွယ်ရှိတယ်၊ အလွန်ကိုရှင်းတယ်၊ အလွန် လေးနက် တယ်၊ ရိုးရှင်းတဲ့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ကောက်သူတွေက ရိုးရိုးပဲကောက်ယူပြီး၊ ကျင့်ကြလုပ်ကြ ပြောကြပြန်တော့ အနှစ်အသားအထိ မရောက်ကြဘူး၊ ဒါကြောင့် ပေါ့ဆဆ အလွယ်တကူလုပ်ကြတယ်၊ ဗုဒ္ဓရဲ့ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ် အထိ ရောက်အောင်မသွားကြဘူး၊ ဒီတော့ အကျိုးလည်း မများကြဘူး၊ အဲ့ဒီအခါမှာ အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ တရားတော် တွေကို ပြစ်ပါယ်ပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ တစ်ပွဲတိုး၊ တစ်နပ်စားတွေဖက် ကူးပြောင်း ပျော်မွေ့နေကြတာ၊ တကယ်ကို ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ စကားရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အထက်တန်းပညာ လိုက်စားဖို့ ဉာဏ်မမီ၊ ကြိုးလည်း မကြိုးစား၊ နောက်ဆုံး ကျောင်းမပျော်ပဲကျောင်းထွက် သွားကြတဲ့ သူတွေနဲ့ ဥပမာနှိုင်းရမယ်“
“ကျောင်းပညာဆိုတာ သိပ်အခက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ “သညာ” ခေါ်တာပေါ့၊ မှတ်ရတာ၊ သားရတာ၊ လေ့ကျင့် ရတာပါပဲ။ ကျောင်းမှာ ဆရာကလည်းရှိပြီးသားပဲ၊ နားမလည်ရင် နားလည်သူထံ ချဉ်းကပ်မယ်၊ အခု ကျူရှင်တွေ ယူနေသလိုပေါ့ကွာ၊ ကိုယ်သာ တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ဒီလောက် ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး၊ တချို့မိဘတွေခမျာ ဆင်းရဲကြလို့ သားသမီးတွေ ကျောင်းပညာရေး မပံ့ပိုးပေးနိုင်လို့ ကျောင်းထွက် အလုပ်လုပ်ကြရရှာတဲ့ ကလေးတွေကို ငါအပြစ်မတင်ပါဘူး၊ သနားစရာပါ”
“တချို့ကြတော့ ကိုယ်ပျင်းတာ၊ မကြိုးစားချင်တာ တခြားအပျော်အပါးတွေဘက် စိတ်ရောက် နေတာနဲ့ မိဘကတော့ ပံ့ပိုးပါရဲ့ သူတို့ရဲ့ အပျင်းအဖျင်းစရိုက်နဲ့ သင်ယူရတဲ့ “သညာ”က ဆန့်ကျင်ဖက် မဟုတ်လား၊ ဖတ်ရမယ်၊ မှတ်ရမယ်၊ ထပ်ပြန်တလဲလဲ လေ့ကျင့်ရမှာတွေကို မလုပ်တော့ ဘယ်နား လည်တော့မလဲ၊ ဒီတော့ ဘာလုပ်ကြလဲ စာမလိုက်နိုင်ဘူး၊ မပျော်ဘူး၊ ကျောင်းထွက်မယ်ဆို ထွက် ပစ် လိုက်ကြတယ်”
“ကျောင်းကပေးတဲ့“သညာ”နဲ့ ကျောင်းကသတ်မှတ်တဲ့ အဆင့်အတန်းပေါ် မူတည်ပြီး၊ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ကြရတာဆိုတော့ စိတ်ပျက်၊ အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်၊ အခက်အခဲကို နည်းနည်းရှေ့ထပ်တိုး ကြည့်မယ် စိတ်မကူးပဲ၊ အလွယ်တကူ အရှုံးပေးပြီး၊ ကျောင်းကိုပစ်ခွါတော့ ကြီးလေ ပင်ပမ်းလေ ဖြစ်ရတဲ့ ဥပမာ လိုပါပဲ၊ တို့ ဗုဒ္ဓရဲ့လေးနက်တဲ့ လမ်းညွန်မှုတွေကို မလိုက်နာချင်တဲ့ အခါကြတော့ အလွယ်လိုက်ပြီး၊ ပေါ့ပေါ့လေး လုပ်ကြတယ့် အကျိုးမများတဲ့အခါ စာတွေခက်လို့ သူဆင်းရဲ ရတာလို့ အပြစ်တင်ချင်သလိုပေါ့ကွာ၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို နားလည်အောင်မလုပ်၊ ထင်ရာလုပ်တာတွေ များလာတော့၊ နောက်ဆုံးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လောဘကြီးတယ် ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်လာရတာပဲ”
“မင်းပဲ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ တို့မြတ်ဗုဒ္ဓက ဆင်းရဲခြင်းတွေ မပြတ်တာ၊ ဒုက္ခသံသရာမှာ လည်နေ ရတာ အ၀ိဇ္ဖာ(မသိမှု)နဲ့တဏှာ(လောဘ)ကြောင့်ပါလို့ အတိအလင်းဟောထားခဲ့ရဲ့နဲ့ ဟိုလောဘလေးက တော့ ကောင်း မှာပါ၊ ဒီလောဘလေးကတော့ ရှိဦးမှလို့ လောဘကို ကိုယ်လိုချင်ရာ အရောင်ခြယ်ပြီး ဗုဒ္ဓထက် ပိုတော် ပိုတတ် နေကြတော့ မခက်ဘူးလား၊ စာတတ်တဲ့ သူတွေကလည်း ပညာလွန်ရင်ကွန့်ဆိုသလို ကွန့်ကြ ညွန့်ကြ ကိုယ် လိုရာဆွဲသီအိုရီနဲ့ တရားတော်အတိုင်း မလိုက်နာ မကျင့်သုံးကြ၊ ဉာဏ်တိမ်တဲ့သူတွေမှာလည်း အပေါ်ယံလေးသိ၊ အဟုတ်မှတ်၊ ထင်ရာလုပ်နဲ့၊ ရှုပ်ကုန်တော့တာပဲ၊ အဲ့ဒီတော့ သူများပြောစရာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပဲ။”
“ဆိုပါတော့ကွာ၊ ဗုဒ္ဓရဲ့ ညွှန်ပြမှုတစ်ခု ဒါနတောဘောဂ၀ါ ဆိုတဲ့ ဓမ္မကလေးတစ်ကြောင်း ဆိုပါတော့ကွာ”
“လှူတန်းခြင်း စွန့်ခြင်းပြုခြင်းကြောင့် ဥစ္စာပစ္စည်း ချမ်းသာ၏-တဲ့၊ ဉာဏ်တိမ်တဲ့ လူတွေက ချမ်းသာ ခြင်တယ်၊ တို့လှူမယ်- ဆိုပြီး လုပ်ကြတယ်၊ မချမ်းသာပဲ မွဲသွားတော့ ဗုဒ္ဓကို လက်ညှိုး ထိုးကြပြန်တယ်၊ အတိုင်း အဆမရှိ၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သင့်-မသင့် မစဉ်းစားပဲ လုပ်ကြတယ်”
“နောက် ဉာဏ်မတိမ်တဲ့ သူတွေကရော”
“သူတို့ကြ ကွန့်ကြတယ်၊ အမြတ်ဆုံးရွေးလှူရမယ်၊ ဒါမှ မြတ်မှာ၊ ဘာလှူရင် ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာမျိုး၊ ဖိနပ်လှူရင် ကားရမယ်၊ အခုလှူရင် နောက်ဘ၀ပါ ချမ်းသာမှာ၊ အထုပ်ထုပ်ကြ-ဆိုတာ အဲ့ဒီလူတွေပေါ့၊ ဒီကြား ထဲ အပိုထပ်ကွန့်ကြတော့ သံသရာမှာပေါ်မျောလေး မျောမယ် ဆိုတာတွေအထိ လုပ်လာကြတယ်”
“မင်းဆိုလိုတာက အဲ့ဒါတွေ မမှန်ဘူးပေါ့”
“တက်တက်စင်ကို လွဲနေတာပဲသူငယ်ချင်း၊ မင်းစ,လိုက်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကြောင့် ငါစကား တော်တော် ပြောရတော့မယ် ထင်တယ် မင်းလည်း နားထောင်ချင်တယ် ဆိုရင်ပေါ့”
“ငါက သိချင်တာလေ၊ မင်းက ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် နားမထောင်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး၊ ရပါတယ်၊ ဆက်ပါ”
“တို့ ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ ဒါနတော ဘောဂ၀ါဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အလွန်လေးနက်တယ်၊ ဒီစကားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်၊ အလျဉ်းသင့်ရင်တော့ တရားတော်တွေ ထုတ်နှုတ် ပြောရမှာမို့ သေချာနားထောင်ကြည့်ပေါ့ကွာ၊ မရှင်းရင်လည်းမေးပေါ့၊ အတွေးအခေါ်လေးလည်းပါမှာ ဆိုတော့ စိတ်ရှည်ရှည် လေး ထားပြီးနားထောင်ပေါ့ကွာ”
“ဒါန-ဆိုတာ စွန့်တာ၊ တရားကိုယ်ကောက်ပြောရရင် အလောဘ မေတ္တာတရားနဲ့ ယှဉ်တယ်၊ လောဘက မကောင်းကျိုးပေးတယ်၊ အလောဘကကောင်းကျိုးပေးတယ်၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာ ကောင်းကျိုးပဲ၊ အလောဘရဲ့ သတ္တိက သံသရာဝဋ်ဒုက္ခကိုပါ ပြတ်တောက်စေနိုင်တဲ့ သဘောရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် “ဒါနတော” ပေးလှူခြင်း၊ စွန့်ခြင်း ပြုကြလို့-ဟောတာ”
“အေးလေ-သူတို့လည်း အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ လုပ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား”
“အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွာ၊ တိမ်တိမ်လေးကြည့်ရင် ဒီမှာရပ်နေမှာပေါ့၊ ဗုဒ္ဓက စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မံဝဒါမိ ၊ စေတနာ(စိတ်ထားမှုက) ကံတွေ (ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးတွေ)ကို ဖြစ်စေ၏ ဆိုတာကို နားလည်မှ လှူတတ်မယ်၊ လှူတတ် စွန့်တတ်မှလည်း အကျိုးပေးမယ်၊ အကျိုးဆိုတာ လုပ်ယူလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြုတဲ့ အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တာ၊ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာက ဗုဒ္ဓစကားနားထောင်ပြီး၊ အကြောင်း ကိုပြုယုံပဲ ဆိုင်တယ်”
“ဒါနတော၊ပေးခြင်း၊ စွန့်ခြင်းကို ပြုတဲ့အခါ စေတနာထားတတ်ရတယ်၊ သူချမ်းသာပါစေ ဆိုမှ စေတနာ မြောက်တယ်၊ ငါချမ်းသာဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးလှူရင် စေတနာမမြောက်ဘူး၊ ကံမမြောက်ဘူး၊ ကံမမြောက်ရင် အကျိုး မပေးဘူး၊ ဒါပဲ၊ ဒါနဆိုတဲ့ အလောဘမစစ်ပဲ လောဘပါနေတော့ ကောင်းကျိုးမပေးပဲ ဆိုးကျိုးပေးမှာပဲ သေချာပဲ၊ နောက်တော့ အလကားပါကွာ ဆိုတာတွေ လုပ်လာကြပါလိမ့်မယ်”
“ကွန့်တဲ့သူတွေရဲ့ အမှားကိုလည်း ပြောပါဦး”
“တို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်က သံသရာလည်ပြီး အသစ် အသစ် သော ဘ၀တွေ (၃၁)ဘုံလုံး ဒုက္ခသစ္စာပါလို့၊ ရိုးရိုးဒုက္ခမဟုတ်ဘူး၊ ဒုက္ခသစ္စာပါလို့ ဟောထားရက်နဲ့ နောင်ဘ၀ ကောင်းစားရေး ဆိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓကို ဗြောင်ဆန့်ကျင်ကြတာပဲ၊ အဲ့ဒါ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်အမည်ခံပြီး၊ ထင်ရာစိုင်းနေကြသူတွေပဲ၊ ဗုဒ္ဓထက်ကို ပိုတော်ပိုတတ်နေတဲ့ သူတွေလို့ ပါးစပ် က မပြောပေမယ့် လက်တွေ့လုပ် နေသူတွေပေါ့ကွာ၊ ဗုဒ္ဓက ချမ်းသာကြောင်း ညွှန်ပြတယ်၊ ဗုဒ္ဓနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက် လုပ်တယ်ဆိုတော့ ချမ်းသာမလား၊ ဆင်းရဲမလား မင်းပဲစဉ်းစား၊ စိတ်မကောင်းစရာက အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ တရားတော်တွေကို အယုံအကြည် နည်းလာ ကြတာပဲ”
“ဟုတ်တယ်နော်-ငါ အပြောခံရတာလည်း ဒါမျိုးပဲ”
“မင်း ပိုရှင်းအောင် ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို တကူးတကန့်ကို လာရောက်ဖူးမြှော် လှူဒါန်းလာကြတဲ့ ဒကာ-ဒကာမတချို့ကို ဟောပြော ဆုံးမပုံလေး ပြောပြချင်တယ်”
“ဆရာတော်ကြီးက တောနေရဟန်းတော်ကြီး တစ်ပါးပဲ၊ ၁၉၈၇ ခုနစ်လောက်က ရန်ကုန်ကို တစ်ခါကြွ လာတယ်၊ မှတ်မှတ်ရရ ၀ိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ဟောပြီး ပြန်ကြွသွားတယ်၊ သီတင်း သုံးရင် ရပ်ရွာတွေနဲ့ ဝေးရာမှာပဲ သီတင်းသုံးတယ်၊ ဝေးလံ သီခေါင်တဲ့ အရပ်တွေမှာ သီတင်းသုံး လေ့ ရှိ တယ်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော် စစ်စစ်ကလွဲပြီး၊ ဘာအကြောင်းမှ မပြောဘူး၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကို ခေတ်လူတွေ နားလည်အောင် ကောင်း ကောင်းရှင်းပြနိုင်တယ်၊ ဗဟုသုတလည်း အလွန်ကြွယ်ဝတယ်၊ တောထဲနေပြီး၊ တရားတော်နဲ့စပ်တဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးရေးတယ်၊ စာဖတ်ပြီး ကျင့်ကြံလို့ ရအောင်လည်း၊ ရေးပြီး ချီးမြှောက်တယ်၊ တရားစခန်း(၄)ကြိမ် ဖွင့်ပြီး၊ ၁၉၉၉ ခုနစ်ကနေ အခုထိ မုံရွာကနေ တောတွင်းကို ၁၅၃ မိုင်လောက်ဝေးကွာတဲ့ အရပ်၊ မဟာမြိုင်တော ခေါ်တာပေါ့ကွာ၊ အဲ့ဒီ တောကြီးထဲမှာ သီတင်းသုံးတယ်၊ ၁၀ နှစ် လုံးလုံး ဧည့်သည် လက်မခံ၊ မတွေ့ပဲ သီတင်းသုံးပြီး၊ ၂၀၀၉ ခုနစ်ဆန်း မတ်လလောက်မှ ဧည့်သည် ဒကာ-ဒကာမတွေ လာခွင့်ပြုခဲ့တယ်”
“တရားရဖို့က အဲ့ဒီလောက်တောင် ကျင့်ရလား”
“ငါ့အထင်တော့ တရားရဖို့ထက် လူတွေကို ကြောက်လို့လို့ပို ထင်တယ်၊ ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ တရားတွေက စာတွေက မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ အနှစ်သာရကို သိပြီးကြောင်း၊ ကျင့်ပြီးကြောင်း အထင် အရှားပါပဲ၊ ငါ ပထမပိုင်း ပြောခဲ့သလို တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ တကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက် ကြောင်းထက်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတောထဲ ပိုပိုတိုးဝင် ချင်တဲ့သူက များတယ်၊ အဲ့ဒီလို လူတွေ များတော့ သူတို့ ကိုယ်ပိုင်လောကီစီးပွါးတွေ အတွက်လောက်ပဲ ဆရာတော်ကြီးကို ချဉ်းကပ်ချင်တဲ့ သူက များတယ်လေ၊ သူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့ မအပ်စပ်တာတွေ များတော့ ရှောင်တဲ့သဘောက ပိုများမယ် ထင်ပါတယ်”
“သိစရာ မှတ်စရာ ကျင့်စရာတွေ အစုံ ရေးလည်းရေး၊ ဟောလည်းဟောပြီးလို့ ကြောင့် ကြမဲ့နေတာပါ၊ သူတော်ကောင်း မှန်သမျှ အများအကျိုး မလုပ်ပဲကို မနေကြပါဘူး။ ဒီလောက်ဆို ဆရာတော်ကြီးအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းလောက်တော့ မင်းသိရောပေါ့”
“သိပါပြီကွာ၊ ဟောတဲ့ တရားလေးပြောပါဦး”
“ဆရာတော်ကြီးက ဗဟုသုတစုံသလို ဝေါဟာရလည်း အလွန်ကြွယ်တယ်၊ ထိမိတဲ့ ဥပမာတွေ၊ တိုရှင်းတဲ့ စကားတွေနဲ့ ဟောလေ့ရှိတယ်၊ သွက်တယ် ရွှင်တယ် ထက်တယ်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေလည်း ရှိတယ်”
“ဖူးမြှော်လှူဒါန်းလာကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဆိုသံဃာပူဇော်ပွဲလာကြတဲ့လူအုပ်စုထဲက ရှေ့ဆုံးက ပုဂ္ဂိုလ် ကို ဆရာတော်ကြီးက မေးလိုက်တယ်၊ “ခု ခင်ဗျားတို့လှူတာ ခင်ဗျားတို့ မရဘူး၊ ကျေနပ်လား”- အဲ့ဒီလို မေးလိုက်တာကွ၊ လှူတဲ့လူကလည်း ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရား-လို့ ပြန်ဖြေတာပေါ့ကွာ၊ ပြောတဲ့စကားကသာ တိုတိုလေး၊ ငါ့နားထဲမှာတော့ အလွန် အဓိပ္ပါယ်လေးနက်ပြီး၊ ကျယ်ဝန်း နက်ရှိုင်းလှတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းပါပဲ၊ ဆရာတော်ကြီးက ဒဲ့ပြောခဲတယ်”
“လုပ်ပါဦး ဘယ်လို နက်ရှိုင်းတာလဲ ”
“ခု-ခင်ဗျားတို့လှူတာ ခင်ဗျားတို့ မရဘူး-ဆိုတဲ့စကားက ပရမတ်သဘောနဲ့ပြောရင် ခင်ဗျားမှမရှိပဲ၊ ငါတို့တွေ ထင်နေကြတဲ့ ငါ, သူတပါး, ယောက်ျား, မိန်းမ မှ မရှိပဲ၊ စိတ်, စေတသိက်, ရုပ်ပဲရှိတာ၊ အဲ့ဒီ သဘော တွေကလည်း အကောင်အထည် ကိုင်ပြလို့မှ မရတဲ့အရာတွေ လှူတဲ့အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အကျိုးဆိုတာလည်း “အစွမ်းသတ္တိ” သဘောမျှလေးပဲ ရှိတာ၊ ဒါကို သိစေချင်တာ ပါမှာပေါ့၊ ဉာဏ်ပညာနဲ့လှူလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ”
“စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ၊ လမ်းမှန်ကို ရှာပြီး၊ မပြတ်လျှောက်နေဖို့သာ လိုတာပါ၊ တို့ စကားပုံရှိသားပဲ၊ လမ်းဆုံးရင် ရွာတွေ့မှာပါပဲ၊ မင်း တကယ် စိတ်ဝင်စားရင် အကုန်သိလာမှာပါ၊ တို့မြတ်ဗုဒ္ဓက ဆရာ စားမချန်ဘူး”
“အေးလေ- ခုမှ ငါက စ, ကြားဖူးသေးတာကိုး”
“အရင်းအနှီးက များပါဘူး၊ “သိချင်တာ”လေး တစ်ခုပဲလိုတာပါ၊ တကယ်သိချင်ရင် မသိတဲ့လူ မရှိပါဘူး”
“နောက်တပိုဒ်ကတော့ လာရောက် ပူဇော် လှူဒါန်းတဲ့သူတွေကို အမြင့်မြတ်ဆုံး ချီးမြှောက် လိုက်တဲ့ စကားပဲကွ၊ “ကျေနပ်လား” ဆိုတဲ့စကားလေး သုံးလုံးပေမယ့် အလွန်လေးနက်ပါတယ်၊ “ကိုယ်လှူတာ ကိုယ် မရပါဘူး၊ သူများအတွက် ကျေကျေနပ်နပ်ကို ပေးပါတယ်” ဆိုတဲ့စိတ်ထားကမှ အလှူရဲ့အကျိုးပေး အပြည့်အစုံ အကြွင်း အကျန် မရှိရစေတတ်တာကို သူတော်ကောင်းကြီးတွေက သိလို့၊ ငါမရလည်း လှူမှာပဲ၊ ကျေကျေနပ်နပ် လှူမှာပဲ ဆိုတဲ့စိတ် ညွှတ်စေချင်လို့ လှူတဲ့သူ မသိသေးလို့ ‘ကျေနပ်လား’လို့ အလှုခံ ပုဂ္ဂိုလ်က လမ်းကြောင်းပြီး ချီးမြှောက်လိုက်တာပဲ တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာမှာ ငါကျိုးမပါရဘူး၊ သူတပါး အကျိုးပဲ ပါရတယ်”
“ဒါလေးတော့ မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့ကွာ၊ ငါရှင်းပါ့မယ်၊ တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနှစ်သာရမို့ပါ”
“မင်းစဉ်းစား တို့တတွေ အများစုလှူတာ ငါ့ဖို့လား၊ သူ့ဖို့လား”
“ဒါကတော့ ရှင်းနေတာပဲကွာ၊ ကိုယ့်ပစ္စည်းလှူမှတော့ ကိုယ့်ဖို့ပေါ့”
“တို့တတွေ ချမ်းသာလား၊ ဆင်းရဲတာများလား”
“အဲ့ဒါဟာ ဆင်းရဲကြောင်းရဲ့ ပြဿနာ အရင်းအမြစ်ပဲကွ”
“ငါ့ဖို့လှူတယ်ဆိုတာလေ၊ ဒီကြားထဲ ငါမရရင် မကျေနပ်ပြန်တော့ မကျေနပ်စိတ်လည်း ထွက်လာ ရော ဒေါသပါပါလာပြီးအားလုံးသဲထဲရေသွန်ဖြစ်ကြရတာပဲ၊ငါ့ဖို့လှူရင် ကောင်းကျိုးမရရုံမက ဆိုးကျိုးပါ လက်ဆောင်ထပ်ရ တတ်သေးတယ်၊ တကယ် အကျိုးပေးတာက စိတ်စေတနာ၊ ၀တ္ထုပစ္စည်းနဲ့ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်က အကျိုးပေးတာ မဟုတ်ဘူး နဲနဲတော့ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိတယ်ပေါ့ကွာ အသေးစိတ်တွေကို ထားပါ တော့ကွာ နောက်ပိုင်း ငါတင်ပြမဲ့ Blog ထဲရောက်မှ စိတ်ကနေ စေတနာကံဖြစ်ပုံ ဖတ်ကြည့်ပေါ့၊ ငါလည်း သူတော်ကောင်း မဟုတ်ပေမယ့် သူတော်ကောင်းကြီးတွေ စကားကို မှီးပြီး မင်းကို လက်ဆောင်တစ်ခုတော့ အကျိုးရှိအောင် ပေးချင်တယ်”
“ဘာ လက်ဆောင်လဲ ”
“စကားလက်ဆောင်ပေါ့ကွာ သူငယ်ချင်းရယ်၊ နောင်လှူရင် ဘယ်တော့မှ ငါကုသိုလ်ရဖို့ မလှူပါနဲ့၊ သူဆင်းရဲက လွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့သာ လှူကြည့်စမ်းပါ၊ မင်းချက်ချင်း ကောင်းကျိုးခံစားရပါ လိမ့်မယ်”
“ဘယ်လို ခံစားရမှာလဲ ”
“မင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သူတပါး အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ပေးတဲ့၊ စွန့်တဲ့အခါ စိတ်ထဲကနေ ဒီအလှူအတွက် ငါကုသိုလ်မရရင်လည်း နေပါစေ၊ သူချမ်းသာပါစေ သုံးပါစေ ချို့ငဲ့ဆင်းရဲမှုမှ လွတ်ပါစေ-လို့ စိတ်ကလေးကို သတိထားပြီး ညွှတ်ကြည့်လိုက်၊ မင်းစိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းမှုတစ်ခု ခံစားရလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒါ လက်ငင်းအကျိုးအမြတ်ပဲ၊ အဲ့ဒီပြုတဲ့ ကောင်းမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးတွေကို မင်းမစဉ်းစားနဲ့၊ သူ့ဟာသူ ဖြစ် လာလိမ့်မယ်၊ အကြောင်း တစ်ခုပြုရင် အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အကျိုးဆိုတာ ရှိစမြဲ၊ မင်းမေ့ထားလည်း သူ့ဟာသူ ဖြစ်မှာ”
“ဟုတ်ကို ဟုတ်တယ် သူငယ်ချင်း၊ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ လုပ်ကိုင်ပြီး၊ ကြီးပွားချမ်းသာ တိုးတက်လာသူ တွေရဲ့ စိတ်ထားတွေကို လေ့လာကြည့်”
“မင်းပြောသလိုဆို ဥစ္စာပစ္စည်း ချမ်းသာရေးပါ ပါလာပြီ”
“မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားပါကွာ၊ငါပြောလို့ငါ့စကားငါ့တရားလို့လုံးဝမမှတ်လိုက်ပါနဲ့၊ငါ့မှာဉာဏ်ပညာ ဒီလောက် မရှိပါဘူး၊မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးပါ၊ငါပါရင်ပူတယ်သူငယ်ချင်း၊ သူပါမှအေးမှာ၊ကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပြီဆိုရင် မင်းတွေ့ အောင်သာရှာကြည့်၊လောဘဦးစီးတယ်၊ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓဟောသလိုကိုယ့် ကို ကိုယ်မလိမ်ပဲ ဖြောင့်မတ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်သုံးသပ်ရင် လောက ပြဿနာရဲ့ အဖြေ တ၀က် လောက် ရှာတွေ့မှာ အသေအချာပဲ”
“ဒီလိုဆို တရားတော်အတိုင်း ကျင့်သုံးကြရင် မဆင်းရဲဘူးပေါ့”
“အေးပေါ့ကွာ တရားတော်ကိုတော့ အရောင်မဆိုးကြနဲ့၊ ကိုယ်လိုရာ မဆွဲကြနဲ့ပေါ့”
“တို့မြတ်ဗုဒ္ဓက ဟောခဲ့တယ်၊ ပုထုဇဉ်ဆိုတာ အမိုက်အကန်း အရူးသဘောမျှ ရှိတာ၊ ဒီထဲမှာမှ ကလျာဏပုထုဇဉ်တွေ ရှိနေ ကျန်နေသေးလို့ ကမ္ဘာမပျက်သေးတာ၊ အာသောက ကျောက်စာဆိုတာ မင်းကြား ဖူးတယ် မဟုတ်လား၊ ငါလည်း အတိအကျတော့ ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူး၊ သဘောသွားနဲ့ပြောရရင် အသောက မင်းကြီးကျောက်စာက လူတွေဟာ-တဲ့ မကောင်းဘူး ထင်ပြီး လုပ်ကြတာ တစ်ခုမှ မရှိဘူးတဲ့၊ ကောင်းတယ်ထင်ပြီး လုပ်ကြတာချည်းပဲတဲ့ ၊ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က “ကိုယ်မှန်တယ် ထင်တာ ကိုယ်လုပ် ကြ တယ်” ပေါ့ကွာ၊ မင်းရော ငါရော အတူတူပဲလေ၊ “ဒီကိစ္စကတော့ မမှန်ပါဘူး၊ ငါ လုပ်လိုက်ဦးမယ်” ဆိုတာ ရှိလို့လား”
“တချို့တွေ ထင်ရာလုပ်တာက ကမ်းကုန်လာကြတယ်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကိုတောင် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ချင်တဲ့သူက ရှိသေး၊ ဟိုဟာစွက်၊ ဒီဟာဖြုတ်လည်း လုပ်ချင်လုပ်ကြတာပဲ၊ အဲ့ဒါ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက်တော့ အနစ်နာဆုံးပဲ၊ အဆိပ်ကိုဆေးလို့ထင်ပြီး၊ မှီဝဲမိရင်တော့ ထိုင်နေရင် အကောင်းသား၊ ထသွားမှ ကျိုးမှန်းသိ ဆိုသလိုပေါ့ကွာ၊ အမှန်မသိရတာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အမှားကို အမှန်လုပ်မိရင် ဆိုးကျိုးပါ ရနိုင်တယ်၊ မလှူရင် ကုသိုလ်မရတာသာရှိမယ်၊ မလှူတတ်ရင် ငွေကုန်တဲ့အပြင် အကုသိုလ်ပါ အဆစ် ထပ်ရနိုင်သေးတယ်”
“ဘယ်သူတွေကများ ပြုဖို့ ပြင်ဖို့ စိတ်ကူးကြသလဲကွာ”
“ဘယ်သူရယ် မပြောချင်တော့ပါဘူး၊ တရားကိုယ်ကတော့ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့တဏှာက တရားခံပါပဲ၊ မင်းကို ပြောရင်း ဂုရုကြီး ဦးဂိုအင်ကာရဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ခု သွားသတိရတယ်၊ အလွန် မှတ် ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါး လေးပါပဲ၊ ငါအတိအကျတော့ မပြောတော့ဘူး၊ အတိုချုပ်ပြောရရင် ….. အမြိုက်ဆေးဆိုတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးရှိသတဲ့၊ အဲ့ဒီဆေးက သောက်လိုက်ရင် အမောအပမ်းပြေ ရောဂါကင်း ခွန်အားလည်း တိုးစေသတဲ့ ဒါပေမယ့် ဆေးဆိုတော့ ဆေးသဘာဝ အရသာမရှိဘူး၊ ခါးလည်းခါးသတဲ့၊ အမောအပမ်းပြေ ရောဂါကင်း ခွန်အားတော့ တိုးချင် ဒါပေမယ့် ဆေးခါးတာကိုတော့ သည်းမခံနိုင်ပဲ ဆေးထဲကို သကြားစွက်သောက်တယ်၊သကြားစွက်ရင် ဒီဆေးအာနိသင်က သိပ်မထက်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အချိုကြိုက်တဲ့သူက မသိဘူး၊ သကြားစွက် သောက်တယ်၊ နည်းနည်းခါးသေးရင် သကြားထပ်ထည့်တယ်၊ နောက်တော့ သကြားစွက်စွက်ပြီး သောက်တဲ့သူက သူများတွေကို လျှောက်ပြော သေးသတဲ့၊ အမြိုက်ဆေးက အစွမ်းမထက်ပါဘူး၊ ချောင်းဆိုး ရင်ကြပ်တောင် ဖြစ်သေးတယ်-တဲ့”
“မရီနဲ့သူငယ်ချင်း၊ ငါတို့ အများစုဟာ အဲ့ဒီအတိုင်းကို ဖြစ်နေကြတာ၊ တချို့တွေဆို တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဓါတ်တော် မွေတော် ရည်မှတ်တဲ့စေတီ ရုပ်ပွားတော်တွေရှေ့ သွားပြီး၊ ရှိခိုးကြ ဆုတောင်းကြတယ်၊ ဒီအလုပ် ကလေး အောင်မြင် ရပါလို၏- ဆိုတာတွေတောင် ပါတတ်ကြတယ်၊ ပြီးရင် မကောင်းမှုတွေကိုတော့ ပြုတယ်၊ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်လို့ ကိုယ်ပြုတဲ့ မကောင်းမှု အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ ဘုရားရှေ့တခေါက်ပြန်လာပြီး၊ အရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရားဟာ အမှန်ကို အားကိုးထိုက်ပါပေတယ်၊ တန်ခိုးတော် ကြီးမားပါပေတယ်-လို့ မျက်နှာတော်ကို စေ့စေ့ ကြည့်ပြီး၊ ဖူးမြှော်လိုက်ကြသေးတယ်၊ ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီးလည်း ကပ်လှူလိုက်ကြ သေးတယ်၊ သူ- မကောင်းမှု ပြုတာ ဒီဘုရားကြောင့် အောင်မြင်တယ် ဆိုတော့ သူကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရား ဘယ်ဘ၀ ဘယ်အဆင့် ရောက် သွား မလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ၊ စဉ်းစားကြစမ်းပါလို့၊ ငါကတော့ ထပ်တိုက်တွန်း ချင်တာပါပဲ။”
“တော်တော့ကို အလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားရမဲ့ ကိစ္စပဲနော်”
“တို့စကားဝိုင်းကတော့ နဲနဲများသွားပြီ ထင်တယ်”
“မင်း ပြောတာတွေတော့ ငါ ပိုပြီး နားလည်လာတယ် ထင်တယ်”
“ငါ ပြောတာတွေ မဟုတ်ဘူးနော် အဲ့ဒါ ဓမ္မအစစ်တွေ ကျင့်သုံးနိုင်လေ အကျိုးရှိလေဆိုတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ တရားတွေပါ”
“တို့ ဘယ်တော့ ဆုံကြဦးမလဲ”
“ဒီလိုလုပ်ကွာမင်းငါရေးနေတဲ့Blogမှာဝင်ဖတ် တစ်ခုတော့ရှိတယ် ပြောတာက ရှင်းပေမယ့် မရှင်းရင်လည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုတော့ ပြန်မေးလို့ရပေမယ့် Blog မှာ ကတော့ ဖတ်ယုံ ဖတ်ရမှာ ငါ့စာ အရေးအသားကလည်း စာရေးဆရာ ရင့်မကြီး မဟုတ်သေးတော့ မရှင်းတာရှိရင် မှတ်ချက်ပေးရမဲ့ နေရာမှာ ရေးသာထား အားမနာနဲ့”
“ဆုံကြတာပေါ့ လောလောဆယ်သာ ငါ အလုပ်လေး နဲနဲများနေလို့ ရက်ဆက်မတွေ့နိုင်တာပါ၊ မင်းနဲ့ တွေ့ရတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ မင်းက ဒဲ့ဒိုးမေးတတ်တော့ စာဖတ်သူကိုယ်စား မေးပြီးသား ဖြစ်တာပေါ့၊ မင်းနဲ့ငါ ပြောကြတာတွေ Blog ပေါ် တင်တော့လည်း သူများတွေ ဖတ်ရတာပေါ့”
“ဒီလိုလုပ်ကွာ မင်းနဲ့ငါ ပြောကြတာကို ဖတ်ရတဲ့ Blog ဖတ်သူတွေ ကြိုက်မကြိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံကြတာပေါ့”
“ငါ ဆက်ရေးစရာလေးတွေ ရှိသေးလို့ ပြန်ဦးမယ်ကွာ”
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ် အပိုင်း(၂)
January 1, 2010 at 10:36 am	(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ်)
ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက တရားတစ်ပုဒ်တွင် (၀ိပဿနာ အားထုတ်မှု သင်တန်းတွင်) ဟောကြားတော်မူ ခဲ့ဖူးသည်။
တရားကို စတင်အားမထုတ်မီ သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြင့် စ,ရသည်ဟုသတိပေးခဲ့ပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကို လိုက်နာကျင့်ကြံ အားထုတ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဦးစွာ ယုံကြည်မှု ရှိရန်လိုသည်။
ယုံကြည်မှ ရဲတင်းသည်-ဟုလည်း၊ ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များ မှန်၏-မမှန်၏ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏ ဉာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ် ရမည်။
ဤနေရာတွင် “မင်း ဉာဏ်တထွာ တမိုက်လောက်နဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ မှန်-မမှန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ့ မလား” ဟု ဆိုကောင်း ဆိုလာနိုင်သည်။ မှန်ပါသည်။ ဉာဏ်မီသလောက်ဖြင့်သာ တိုင်းထွာရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် အလျဉ်းသင့်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှ ရလာသော အယူအဆ တစ်ခုကို တင်ပြလိုပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားစစ် တရားမှန်ဟူသမျှ လွန်စွာရိုးရှင်းသည်။ (ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး၊ ထူးထူး ဆန်းဆန်း နား မ လည်နိုင်စရာ များကို ဗုဒ္ဓတရားတော်ပါဟု ရည်ညွှန်းလာလျှင် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော် အစစ်အမှန် ဟုတ်-မဟုတ် အထူး သတိထားရန် လိုအပ် ပါသည်။)
ရိုးရှင်းသလောက်လည်း လွန်စွာမှ အဓိပ္ပါယ်လေးနက် ကျယ်ဝန်းသည်။ (အဓိပ္ပါယ် နက်နဲမှု မရှိသော သာမန်မျှသာ ဖြစ်သောတရားများ ဖြစ်နေလျှင်လည်း၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်စစ် မှန်-မမှန် အထူး သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။)
မြတ်ဗုဒ္ဓက “သဗ္ဗပါပဿ အကရဏံ” မကောင်းမှုအလုံးစုံမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ-ဟု ညွှန်ကြား၏။
ထိုတရား ထိုစကားသည် မည်မျှရိုးရှင်းပါသနည်း။ အလွန်ရိုးရှင်း၏။
သို့သော် အလွန်အဓိပ္ပါယ် ကျယ်ပြန့်၍၊ ထိုညွှန်ပြချက်၏ နောက်ကွယ်တွင် တန်ဖိုးရှိသော၊ လေးနက်သော အကြောင်း အရာများ ပါဝင်နေ၏။ လိုက်နာသူအတွက် ဖော်ပြ၍ မကုန်နိုင်လောက်အောင် အကျိုးကျေးဇူး ရစေမည့် အကြောင်းအရာများ ရှိ၏။
သေချာစေ့စေ့ တွေးယူမှ “မကောင်းမှု အလုံးစုံမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်”မှာ လွန်စွာခက်ခဲသော ကိစ္စ တစ်ရပ်မှန်း သိရှိလာ ပါလိမ့်မည်။
“မကောင်းမှုအလုံးစုံမှရှောင်ကြဉ်”နိုင်သူသည်လည်း၊သူတော်ကောင်းစာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် မကောင်းမှုဟူသည် အဘယ်ပါနည်း။
မိမိကြောင့်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေသောအပြု၊အပြော၊အတွေးအကြံဟူသမျှသည်မကောင်းမှုဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် စာဖတ်သူ လူငယ်လူလတ်များ စောဒကတက်စရာ အကြောင်းတစ်ခု ရှိပါသည်။
ဤသို့ဆိုပါက “တီကောင် တစ်ကောင်သည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍ နေပေပြီမဟုတ်လော” ဟု ဆိုနိုင် ပါသည်။တီကောင်တစ်ကောင်သည် မည်သည့်သတ္တ၀ါကိုမျှ ဒုက္ခမပေး၊ မြေဆီစား၍သာ အသက် ထက်ဆုံး နေထိုင် သွားသည် မဟုတ်ပါလောဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များသည် လွန်စွာအဓိပ္ပါယ်ကျယ်ဝန်း နက်ရှိုင်း သည်ဟု ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မကောင်းမှုရှောင်- ဟူသောစကား၏ နောက်ကွယ်တွင် မကောင်းမှုဟူသမျှကို ပြုနိုင်စွမ်း ရှိပါလျက် မပြုပဲ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုကြောင်းကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် လူများကိုသာ ဟောကြား၍ တိရစ္ဆာန်များကို မဟောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်၏ သဘော သည် တိရစ္ဆာန် အမျိုးအစားပေါ်လိုက်၍ ၄င်းတို့တွင် စွမ်းအားရှိသမျှ နိုင်လိုမင်းထက် ပြုကြ သည်သာ များကြ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များမှန်-မမှန်စိစစ်ရေးဖက်ပြန်ဆက်ကြပါဦးစို့။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော် မူသော တရားတော်များအနက် “ကာလမသုတ်” သည် အထူးထင်ရှား၏။ (အကျယ်ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုရန် အလွန် သင့်၏။)
မှန်မမှန် လက်ခံဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် “မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိခြင်း” လိုအပ်ကြောင်းကို ညွှန်းဆို၏။ ထို့ကြောင့်ပင် မြတ်စွာဘုရား၏ လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မည်၊ ကျင့်သုံးမည်ဆိုသော လူငယ်လူလတ်တို့သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသော တရားတော်များ မှန်-မမှန် အခြေခံအားဖြင့် သိရန်လို၏။
ထို့ကြောင့် တရားအားမထုတ်မီ သမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမည်ဟု ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော် ကြီး ကလည်း ညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်၏။ မိမိကျင့်သုံးမည့် တရားတော်ကို မိမိမယုံကြည်လျှင် လမ်းတစ်ဝက်တပျက်နှင့်ပင် ရပ်တန့်သွားနိုင်သလို၊ သူတပါး ဆွဲဆောင်သောအခါ မှားယွင်းသည့် လမ်း ကိုပင် ရောက်သွားနိုင်သည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ ဉာဏ်အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလာစေရန်အတွက် ကျင့်သုံးရမည့် အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို ညွှန်ပြခဲ့၏။
ပညာမဂ္ဂင်ဖြစ်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိ- ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော သိမြင်ခြင်း။
သမ္မာသင်္ကပ္ပ- ကောင်းမွန် မှန်ကန်သော အတွေးအကြံ။
သမာဓိမဂ္ဂင်ဖြစ်သော သမ္မာဝါယမ- ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော အားထုတ်မှု။
သမ္မာသတိ- ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော အောက် မေ့မှတ်သားမှု။
သမ္မာသမာဓိ- ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော တည်ငြိမ်မှု။
သီလမဂ္ဂင်ဖြစ်သော သမ္မာဝါစာ- ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော စကားပြောဆိုမှု။
သမ္မာကမ္မန္တ- ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော အလုပ်။
“ ကောင်းတိုင်းလည်း မှန်တတ်သည် မဟုတ်သလို မှန်တိုင်းလည်း ကောင်းတတ်သည် မဟုတ် သည့် သဘောရှိတတ် သောကြောင့် ကျွန်တော်၏ အတ္တနောမတိဖြင့် ကောင်းမွန် မှန်ကန်သော ဟု စတင် အနက် ဖွင့် မိပါ သည် စဉ်းစား၍လက်ခံကြရန် ဖြစ်ပါသည် ”
ထိုလမ်းရှစ်သွယ်တွင် နောက်ဆုံးလမ်းသည် သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သော်လည်း၊ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော် ဘုရားကြီးက သမ္မာဒိဋ္ဌိမှ စ,ပါဆိုသောကြောင့် နားရှုပ်ထွေးဖွယ်ရာရှိသည်။
ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူတို့ ရှင်းလင်းစေရန် သမ္မာဒိဋ္ဌိကို နှစ်မျိုးခွဲ၍ နားလည်ထားသင့်ပါသည်။ တရားအား မထုတ်မီရှိရမည့် သမ္မာဒိဋ္ဌိသည် (လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိ) မှန်ကန်သော ယုံကြည်မှုကိုသာ ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။
တရားတော်အပေါ်ခိုင်မာစွာယုံကြည်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာတရားအားထုတ်သင့်ပါသည်၊ ထိုသို့ယုံကြည်ပြီး၊ တရားအားထုတ်တော့မည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သီလမဂ္ဂင်သုံးပါးဖြစ်သော သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တ၊ သမ္မာအာဇီဝ တဆင့်စီ အားထုတ် ရသည်။ (တဆင့်စီ ဆိုသောကြောင့်၊ ရှုပ်ထွေး မသွားပါနှင့်၊ ရှင်းအောင်ခွဲခြား ပြဆိုရသော်လည်း၊ တပြိုင်နက်တည်း လိုလို ကျင့်သုံး၍ ရသည့် တရားများဖြစ်ပါသည်။)
ထို့နောက်မှ သမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါး။ သမ္မာဝါယမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ။
ထို့နောက်မှ ပညာမဂ္ဂင်နှစ်ပါး သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ-စသည်ဖြင့် ကျင့်ကြရသည်။
စာဖတ်သူ၏ ဉာဏ်ပညာကို နောက်ဆုံးပြောင်းလဲ ပေးမည်မှာလည်း သမ္မာဒိဋ္ဌိပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသမ္မာဒိဋ္ဌိကား လောကုတ္တရာ သမ္မာဒိဋ္ဌိဟု ဆိုသော်၊ ရအံ့ထင်၏။
သင်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များအပေါ် ယုံကြည်လာစေရန် သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင် လိုအပ်၏ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအမြင် သင့်ထံ၌ရှိလာအောင် ရှေးဦးစွာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့သော တရားတစ်ပုဒ်ကို တင်ပြကြည့်မည်။ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် သင်ဆုံး ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
[ပြည့်စုံသော ဓမ္မခန္ဓာ(တရားတစ်ပုဒ်)အဖြစ် ဖော်ပြရလျှင်-သဗ္ဗေသင်္ခါရ အနိစ္စာတိ၊ ယဒါပညာ ယျ ပဿတိ အထနိဗ္ဗိတတိ ဒုက္ခေ ဧသမဂ္ဂေါ ၀ိသုဒ္ဓိယာ-ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေခံအဆင့် အစပျိုးနေခြင်းသာ ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ပိုင်းမှ ယဒါပညာယျ မှ ၀ိသုဒ္ဓိယာ – အထိကို ခေတ္တ မေ့ ထား ပါ။ နောင် ၀ိပဿနာ လေ့လာ လိုက်စားလာလျှင် အလိုလိုပင် သိသိ လာ ပါလိ့မ်မည်။]
အနိစ္စာတိ- မတည်မြဲကြကုန်- ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားဟောသော ဤတရားသည် စာရှုသူကိုယ်တွေ့မျက်မြင် အသိဉာဏ်နှင့် ချိန်ထိုး ကြည့်လျှင် မှန်ပါသလား-စာရှုသူ။
မြဲသောအရာအဘယ်မှာသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသနည်း။မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်မှန်သမျှအလွန် ရိုးစင်း၏ အဓိပ္ပါယ်လွန်စွာနက်နဲကျယ်ဝန်းပါသည်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏သာမန်မျက်စေ့နားနှာခေါင်းလျှာ ကိုယ်တို့ဖြင့် လည်း သိနိုင်သည်။ လေသည် အမြဲလှုပ်ရှားနေသည်။ အပူသည် မမြဲ။ အအေးသည် မမြဲ။ လူ၊ သက်ရှိ ၊ သက်မဲ့၊ သစ်ပင် တောတောင် ရေမြေတို့ သော်လည်း မမြဲ။
ဉာဏ်ပညာကြီးရင့်သော သိပံ္ပပညာရှင်များ၏ ဖော်ထုတ်မှု တစ်ခုကို တင်ပြလိုပါသည်။ (သူတို့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ တရားတော် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံရန် ဖော်ထုတ်ခြင်း မဟုတ်၊ သူ့အလို သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ သုတေသန မြောက်များစွာပြု၍ ဖော်ထုတ်ကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။)
– အရာဝတ္ထုဟူသမျှကို အက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
– ဒြဗ်တစ်ခု၏ အသေးငယ်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းကို အက်တမ်ဟုခေါ်သည်။
– အက်တမ်တွင် အီလက်ထရွန်၊ ပရိုတွန်နှင့် နျူတရွန်ဆိုသော အမှုံများပါဝင်သည်။ (ဟိုက်ဒရိုဂျင် အက်တမ်တွင်မူ အီလက်ထရွန်နှင့် ပရိုတွန်သာပါဝင်သည်။)
– အက်တမ်တစ်ခု တည်မြဲစွာ ရပ်တည်နေနိုင်အောင် ထိုအက်တမ်၏ အလယ်ဗဟိုရှိ နျူထရွန်နှင့် ပရိုတွန်ကို အီလက်ထရွန်အမှုံများက ၀ိုင်းပတ်၍ပြေး နေရသည်ဟု ဆိုသည်။
အရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်မြဲအောင် မတည်မြဲမှုက (၀ိုင်းပတ်ပြေးမှုက) ထောက်ပံ့မှသာ တည်မြဲ သည်ကို သိပံ္ပ ပညာရှင်များ မသိခင်ကတည်းက မြတ်ဗုဒ္ဓကသိခဲ့၍ ဟောကြားခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်တို့နေစကြ်ာဝဠာတွင်ကမ္ဘာကြီးတည်မြဲခွင့်ရစေရန်သူကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ရှား လည် ပတ်နေရ၏။(ထို့ကြောင့်နေ့နှင့်ညဖြစ်ပေါ်လာသည်။)သူဗဟိုပြုထားရသောနေကိုလည်းလှည့်ပတ် ပြေးနေရသေး ၏ (ဆွဲငင်အားနှင့်ဗဟိုခွါအားညီမျှစေရန်)။တပတ်ပြည့်ရန်ရက်ပေါင်း၃၆၅ရက်ကြာ၏။(ထိုကြောင့်ပင်ရာသီဥတု ပြောင်း လဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်၏။) စကြ်ာဝဠာကြီး တစ်ခုလုံးသည် အချိန်နှင့်အမျှ ရွေ့လျားပြောင်းလဲ နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းကြည့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပုပ်မသိုးရအောင်အပူဓါတ်ပေးရ၏။ထိုအပူဓါတ်ကို အစား အစာအဟာရမှ၎င်း လှုပ်ရှား မှုမှ၎င်းရ၏။ ထိုအပူဓါတ်ရသောကြောင့် မပုပ်သိုးစေသည် မှန်သော်လည်း၊ အပူဓါတ်က လောင်ကျွမ်း သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် အိုမင်း ရင့်ရော်လာရ၏။
တည်မြဲအောင် မတည်မြဲမှုများကသာ ထောက်ပံ့နေရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဉာဏ်အမြင်မှာ ရှင်းလင်း လောက်ပေပြီ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြ၍ ကျွန်ုပ်ဉာဏ်မှီသမျှ ရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။ စာဖတ်သူ လူငယ် လူလတ် တို့ ဉာဏ်အမြင်တွင်မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဉာဏ်ပညာလွန်စွာကြီး၏။အပြောမဟုတ်၊အလုပ်နှင့်လည်းသက်သေပြခဲ့၏၊ လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၅၀ကျော်က ဟောကြားသော တရားတော်များ ယနေ့ထက်တိုင် မှန်ကန်နေတာလည်း အမှန်ပင် ဖြစ်ပါပေသည်ဟု မိမိစိတ်၌ ကိုယ်တိုင်ခံစား ယုံကြည်မှုရလာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှေ့ကိုခြေတစ်လှမ်း ထပ်ဆန့်၍ ရပါပြီ။
သို့သော်- မယုံကြည်နိုင်သေးပါ ဆိုလျှင်လည်း၊ စိတ်မပျက်ပါနှင့်ဦး၊ ကျွန်ုပ်ဉာဏ်မီသမျှ ကျွန်ုပ် တွေ့ကြုံခဲ့ သမျှ တင်ပြပါဦးမည်။ စာဖတ်သူ အနေဖြင့်မူ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းနှင့် အမှားအမှန် ခွဲခြားသိလိုသော ဆန္ဒသာ အရင်းအနှီး ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။